ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၄-၈-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၄-၈-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
- တိုင်းရင်းသားတွေ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန် သွားနေသည်ဟု UNFC ပြော click
- ဖွဲ့စည်းပုံကို မပြင်နိုင်ရင် မြန်မာပြည်အတွက် မထူးခြားဟု ရခိုင်အင်အားစုများ ပြော (ရုပ်သံ) click
- သူတို့ပြောသော ၈ လေးလုံး အမှတ်တရ မြင်ကွင်းများ click
- ၈၈ ငွေရတုအခမ်းအနားအကြိုလှုပ်ရှားမှု - ပြည်သူ့အသံ (ရုပ်သံ) click
- စစ်အစိုးရ ဝါဒဖြန့်တဲ့ မင်းမဲ့စရိုက်ဆူပူမှုကို ချေဖျက်မယ့် “သတင်းစာတွေ ပြောတဲ့ အရေးတော်ပုံ” စာအုပ် ထုတ်ဝေ (ရုပ်သံ) click
- နှောင်းအတိတ်အရိပ်ပမာ (ဆောင်းပါး) click
- သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ ပြည်တော်ပြန်ခရီးစဉ် (၁၂) click
- ကံ့ကော်ပွင့်၏ သံမဏိဝတ်ဆံ (၉) click
- မြန်မာ့စာရင်းဇယားတွေ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီရေး ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကို ရန်ကုန်မှာ ကျင်းပ (ရုပ်သံ) click
- ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ် မလုံလောက်၍ လိုအပ်ချက် မြင့်မားနေဟု ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်း ပြော (ရုပ်သံ) click
- ဆေးမြီးတိုနဲ့ ကုလို့ အိမ်ဈေး ကျမသွားဘူး (အင်တာဗျူး) click
- ဆရာကြီးပါရဂူ ကွယ်လွန်ခြင်း ၂ နှစ်ပြည့် စာကြည့်တိုက်အတွက် ငွေလှူဒါန်း (ရုပ်သံ) click
- ရွှေ့ပြောင်း ရခိုင်လူမျိုးများကို ကူညီထောက်ပံ့ဖို့ ရန်ပုံငွေဂီတပွဲ ကျင်းပ (ရုပ်သံ) click
- အနာဂတ်အတွက် အရေးကြီးသည့် ကစားခြင်း (သူ့အတွေး သူ့အမြင်) click
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ. လစာ ၊၀န်ကြီး လစာ
စသည်တွေကို အောက်ခြေ နိုင်ငံဝန်ထမ်းလစာ အဆင်.
တခုနဲ. binding လုပ်ထားသင်.ပါတယ်၊
ဥပမာ ၀န်ကြီး လစာဟာ အောက်တန်းစာရေး လစာရဲ.
၈ဆ / ၁၀ ဆ စသည်ဖြင်.ပါ ။
အခုက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ. လစာ ၊၀န်ကြီး လစာ တွေကို အများကြီးတိုးပေးထားပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်၊
ရပိုင်ခွင့်တွေ မတရား ပေးထားတော့
အရာရှိတော်တော်များများက ကိုယ်.လစာတောင်မသိကြတော့ဘဲ ဖြစ်လာကြတယ် ၊
ကုန်ဈေးနှုန်း တက်တာတွေ ၊ ငွေကြေးဖေါင်းပွတာတွေ
မသိကြ၊ စိတ်မ၀င်စားကြတော.ဘူး ၊
အခုဆို ဒေါ်လာဈေးတက်၊ ကုန်ဈေးနှုန်း တက်လို.
ဝန်ထမ်းငယ်တွေက လစာမဟုတ်ဘူး ရက်စာဖြစ်နေတယ်။
မလောက်မင လစာနဲ့ ခိုးစားတော့ ခွေးဟောင် လုပ်စားတော့မိုးခေါင် ဖြစ်နေ
ပြီ။ ဝန်ထမ်းတွေမှာ အသုံးချခံ မဖြစ်ဖို့နဲ့ အရည်အတွက် မဟုတ်ပဲ အရည်
အချင်းရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ ခန့်ဖို့ လိုတယ်။
မိသားစု အရေးကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးရမယ်။
လွှတ်တော် နာယက ကြီး ညှီကွပ် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်က တန်ခိုးအာဏာ
ကြီးထွားခဲ့ တဲ့ ထောက်လှမ်းရေးတွေ ချေမှူန်းသလို အကျင့်ပျက်နေတဲ့
ဝန်ကြီး ဝန်ကလေး ဖေါချော တွေ ။ခေတ်အဆက်ဆက်စားဖား DGတွေ။
ပြည်သူတွေကို ဥပဒေ ပုဒ်ထီး ပုဒ်မ တွေ မျိုးစုံနဲ့ ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့
ရဲ။ထွေအုပ် ။ မြေစာရင်း။ စည်ပင် ။ကညန ။လဝက ။ပတခ ။ပဆင ။တွေ
မှားရင် မညှာပါနဲ့ ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အရ အရေးယူပါ
ဝအောင် ပေးပါ ဝအောင်ကျွေးပါ။